Juunyo | 2014 | WEEJIDOW
Archive for Juunyo, 2014
War deg deg ah: Nabadoon lagu dilay Degmada Afgooye, halka mid kalana lagu dhaawacay
Juunyo 30, 2014
WAAJIDPRESS – 30 Jun 2014;
Wararka laga helaayo Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose, ayaa waxay sheegayaan in lagu dilay nin Nabadoon ahaa, halka mid kalana ay ku dhaawaceen kooxo hubeysan.
Nabadoonada oo wada socday, ayaa waxaa lagu weeraray halka loo yaqaano Obeeg, oo ku dhow Isgoyska Afgooye, goobjooge, ayaa soo sheegaaya in si gaadmo leh rasaas loogu shiniqay Nabadoonada.
Goobjoogaha, ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in Nabadoonada ay soo weerartay ilaa 3 nin oo bistoolado ku hubeysnaa, kuwaa oo dilka kadib isaga baxsaday aagga Obeeg.
Dadka Deegaanka oo gacan u fidiyay dhibane-yaasha, ayaa waxay u qaadeen Isbitaalka weyn ee Degmada Afgooye, halkaasoo la soo sheegaayo in uu ku geeriyooday mid ka mid ah Nabadoonada.
Allaha u naxariistee Nabadoonka geeriyooday, ayaa waxa lagu magacaabi jiray Maxamed Jaamac Joof, halka midka dhaawacmayna lagu magacaabo Maxamed Cabdi Nuur.
Ciidanka Nabad Suggida iyo Booliska ka hawlgala Degmada Afgooye, ayaan la soo sheegin cid ay u soo qab qabteen dilka iyo dhaawaca loo geystay Nabadoonada.
Weerarka lagu dilay Nabadoonka, midka kalana lagu dhaawacay, ayaa waxa uu dhacay casir liqii galabta, xilli dadka reer Afgooye u diyaar garoobayeen xilligii afurka.
Dilalka qorsheysan ee ka dhacaaya Deegaanada ay gacanta ku heyso Dowladda Somaliya, ayaa waxay dadku isla dhex marayaan inay geyneyso Al Shabaab.
Al Shabaab waxay dishaa dadka indhaha u ah bulshada Somaliyeed, iyadoo u cuskaneyso inay saluugsan yihiin fikirkooda xagjirka ah.
War deg deg ah: Ra’isul Wasaare Cabdi-Welli oo u sheegey Xildhibaanada Daarood in ay isaga baxaan Muqdisho Maadama Madaxweyne Xassan Sheekh uu noqdey Qabiili- Ayuu yiri Ra’isul Wasaare Cabdi-Welli
WAAJIDPRESS – 30 JUN 2014:
Ra’isulwasaaraha Xukumadda Somalia Cabdiwali Sheekh Axmed iyo ergayga Urur goboleedka IGAD u qaabilsan arrimaha Somalia Maxamed Cabdi Afeey ayaa wada olole ay Xildhibaanada beesha Daarood uga codsadeen inay dhamaantood iskaga baxaan Muqdisho. Ra’isulwasaare Cabdiwali Yuulka ayaa ololahiisa u igmaday Siyaasiga Cabdirisaq Juriile ,waxaana la sheegay inuu xalay telefoon kula hadlay tobaneeyo ka mida Xildhibaanada beesha Daarood”.
Xildhibaanada Daarood waa inaysan lumin jaaniska aan maanta heeysano,Waxaad ku tihiin marti Muqdisho sidaas darteed anagoo ka jawaabeeyno waxay sameeyeen kuwa Hawiye waa inaad si degdega ugu kala baxdaan Garowe iyo Kismaayo,waana inaad Caalamka u sheegtaan inay Xamar noqon karin Caasimadda Somalia oo qabiil gaara leeyahay” ayuu yiri Ra’isulwasaare Cabdi-Welli oo dhinaca kalena tibaaxay inuu siyaasadii arrimaha dibadda uga adkaaday Madaxweyne Xasan Maxamud Calasow.
“Ethiopia iyo Kenya anigaa gacanta idinkugu hayo,waxaana hoowshaas u xilsaaray Ergayga IGAD Maxamed Cabdi Afeey” ayuu sidoo kale Xildhibaanadii la hadlay ku yiri Ra’isulwasaare Yuulka.
Maxamed Cabdi Afeey ayaa qaar ka mida Xildhibaanada Daarood wuxuu u sheegay in Caasimadda Somalia laga dhigi doono Kismaayo sidaas darteedna loo baahan yahay inay taageero muujiyaan.
Inkastoo Madaxweynaha Somalia uu ku magacaaban yahay Xasan Sheekh Maxamuud oo qabiilka Hawiye u dhashay hadana xukunka talada waxaa daaha gadaashiisa ka maamula nin u dhashay qabiilka Reer Aw Xasan oo lagu magacaabo Faarax Cabduqadir .
Faarax Cabduqadir oo ah Wasiirka Garsoorka wuxuu qabaa gabadh uu adeer u yahay hogaamiyaha Jabhada Raaskambooni Sheekh Axmed Madoobe.
Daawo Sawirrada: Ku Xigeenka Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya oo Maanta Soo Gaaray Magaalada Baydhabo
Wafdigan Magaalada Baydhabo soo gaaray Maanta ayaa waxaa hogaaminaayey Kuxigeenka wakiilka Midowga Afrika uqaabilsan arimaha Soomaaliya Lydia wonyoto Mutende waxaana garoonka Diyaaradaha Magaalada Baydhabo kusoodhaweeyey Wasiiro ka tirsan Dowlad goboleedka Lixda Gobol iyo saraakiil sare oo katirsan AMISOM soo dhoweynta kadib ayaa waxaa ay kulamo laqaadatay saraahiisha ciidanka AMISOM iyo saraakiisha ciidanka Gobolka Baay, sidookale waxay kulamo laqadatay xubno kasocday qaybaha bulshada kudhaqan Magaalada Baydhabo.
Lydia wonyoto Mutende ayaa sheegtay ujeedadada Baydhabo in ay tahay in ay isbartaan saraakiisha AMISOM iyo kuwa Soomaaalida.
Abaanduulaha Qaybta lixdanaa ee ciidanka SAREEYE GUUTO Yaasiin Aadan Xiirey (oo ka soo jeeda DIGIL & MIRIFLE) ayaa kamid ahaa saraakiishii kulanka kahadashay Lydia wonyoto Mutende oo ah Kuxigeenka wakiilka Midowga Afrika uqaabilsan arimaha soomaaliya ayaa ah booqashadan maanta kutimid Baydhabo booqashadii ugu horeysay.
War deg deg ah: Gaari uu lee yahay Sarkaal ka tirsan Maamulka Jubba oo qarax lagula eegtay Magaalada Kismaayo
Wararka laga helaayo Magaalada Kismaayo, ayaa waxay sheegayaan in galabta qarax lagula beegsaday gaari uu lee yahay Taliye Ku Xigeenka Ciidanka Nabad Suggida ee Magaalada Kismaayo Maxamed Cali Gaas.
3 ka mid ah Ciidamada Ilaalada ee Taliye Ku Xigeenka, ayaa waxaa la xaqiijiyay inay qaraxa ku dhaawacmeen, halka ay ku dhimatay haweeney wadada mareysay, iyadoo gaariga la qarxiyay uu noociisu uu ahaa SURF.
Waxaa soo baxaaya warar sheegaaya in Gaas aanu la socon gaariga xilligii qaraxa lala beegsanaayay, laakiin ay waxyeelo ka soo gaartay tiro ka mid ah Ciidamada Ilaaladiisa iyo burbur ku yimid gaarigiisii.
Qaraxaan oo galabta ka dhacay Xaafada Shaqaalaha, ayaa waxaa ku baxay Ciidamada Maamulka Kmg ah ee Jubba, waxayna ka sameeyeen hawlgal ka dhan ah kuwii qaraxa geystay.
Qaraxa, ayaa wuxuu u muuqday mid lagu sii diyaariyay wadada dhinaceeda, isla-markaana Ciidamada Maamulka Jubba, ayaa dad u soo qab qabtay qaraxaasi.
Saraakiisha Magaalada Kismaayo wax war ah kama soo saarin qaraxa khasaaraha geystay, ee galabta ka dhacay Xarunta Gobolka Jubbada Hoose ee Magaalada Kismaayo.
Qaraxyadu waxay qayb ka yihiin weerarada ay Shabaabku u adeegsanayaan, dagaalada ay kula jiraan dhinacyada ka soo horjeedo.
War deg deg ah: Dowladda oo Maamul cusub umagacawday Qoryooleey iyo Guddoomiyihii hore oo diiday wareejinta xilkaasi
XOG QARSOON: Xildhibaanada Beelaha Daarood oo Muqdisho iskaga Baxaya
Juunyo 29, 2014
WAAJIDPRESS – 29 Jun 2014:
Magaalooyinka uu ku taamayo waxaa ka mid ah Garooweio Kismaayo.
Ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in Jurille uu qorshahan billaabay kadib markii xildhibaanada beelaha Hawiye iyo wasiiradooda ay qaadaceen dowladda, taasi oo keentay in baarlamanka uu muddo ku dhow toddobaad kulmi la’ yahay.
War deg deg ah: Xoogag hubeysan oo caawa weeraray Xarunta Gobolka Banaadir ee Waqooyi Bari Muqdisho
Xoogag hubeysan, ayaa waxay caawa weerar xoogan ku qaadeen Xarunta Gobolka Banaadir, oo Maamulka Muungaab uu u wareejiyay halka kala qaybisa Degmooyinka Heliwaa iyo Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir.
Xoogagaan, ayaa waxay laba jiho ka weerareen Xarunta Gobolka, iyadoo qaarkood la soo sheegaayo inay kaga soo gudbeen dhinaca Xaafada Waxarcade, halka qaarka kalana ay ka soo galeen dhabarka dambe ee Hotel Ramadaan.
Difaaca hore ee laga ilaaliyo Xarunta Gobolka Banaadir oo ku yaal Garaashka Xaaji Abuukar Cumar Cadaan, ayaa wuxuu iska horimaad kulul ku dhex maray Ciidamada Dowladda iyo Xoogagii weerarka soo qaaday.
Weerarkaan oo dhacay caweysnimadii caawa, ayaa Degmooyinka Heliwaa, Yaaqshiid iyo Kaaraan laga maqlaayay daryanka hubkii ay labada dhinac isu adeegsanayeen, intii uu weerarku ka sii socday halkaasi.
Nin ka tirsan dadka degan aagga uu weerarku ka dhacay, ayaa waxa uu ku waramayaa in Ciidamada ku sugan difaaca Garaashka Xaaji Abuukar Cumar Cadaan, ay dib u riixeen Xoogagii weerarka soo qaaday.
Xoogagaan, ayaa waxay iska horimaadka ku dileen tiro ka tirsan Ciidamada Dowladda, waxaana soo baxaaya warar sheegaaya in Xoogagaasi ay horey u sii qaateen qoryo ay lee yihiin Ciidamada Dowladda.
Dagaal-yahanada weerarka geysatay, ayaan laga warqabin khasaaraha ka soo gaaray weerarka, sidoo kalana majirto cid weli ka hadashay weerarkaasi.
Dhanka kale weerarkaan, ayaa waxa uu ku soo aadayaa, xilli boqolaal askari fiidnimadii caawa lagu daadiyay inta u dhaxeyso Ex Control Balcad ilaa aagga Xeradii Militariga ee Maslax, iyadoo guri kasta lagu hor arkaayay Ciidanka Dowladda.
Shabaabku waxay ku hanjabayaan inaanay Ciidamada Dowladda iyo Amisom ka hor joogsan karin, weeraro ay ka fuliyaan Magaalada Muqdisho.
DAAWO: MAANTA BANAANBIXII BAYDHABO KA DHACAY EE LOOGA SOO HORJEEDEY IGAD IYO ………
War deg deg ah: Sheikh Caan ah oo Baledwayn lagu dilay
Koox Hubeysan ayaa Xalay Magaalada Baledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ku Toogtay Sheikh ka mid ah Culumadda Magaalada Baledweyne.
Alle ha u naxariistee Sheikha ayaa waxaa lagu Magacaabi jiray Sh Cabdi Kabtan,waxaan Xiliga la dilay uu ka soo baxay Masjid uu ku soo Tukaday salaadii Taraawiixda.
CIIDAMO KATIRSAN DOWLADA OO MAANTA XILI DHARAAR CAD AH LAGU DILAY LAAMIGA MAKA AL-MUKARAMA EE MAGAALADA MUQDISHO
Kooxo Bistoolado ku hubeesan ayaa maanta Isgooska Debka ee Magaalada Muqdisho oo ka mid ah goobaha ugu amaanka wanaagsan Magaalada, waxa ay ku dileen labo askari oo katirsanaa Ciidamada ilaalada Wadooyinka xili ay ku guda jireen howlahooda shaqo.
Taliyaha Ciidanka Nabad Galyada Wadooyinka Jen Cali Xirsi Barre (Cali Gaab) ayaa xaqiijiyay in labo askari oo katirsanaa Ciidanka Nabad galyada Wadooyinka maanta lagu dilay Laamiga Maka Al-mukarama gaar ahaan isgooska Dabka.
Jen Cali Gaab ayaa sheegay in ay baxsadeen kooxihii dilka u geestay labada askari ee katirsanaa Ciidanka Taraafikada , waxa uuna ku hanjabay in ay gacanta kusoo dhigi doonaan ragii dilkaasi ka dambeyn ayna horgeyn doonaan Sharciga.
Dhinaca Kale Askari katirsan Ciidanka Milatariga Soomaaliya ayaa maanta lagu dilay Xaafada Suuqa Xoolaha ee Degmada Hiliwaa ,waxaana dilka ka dib la sheegayin askarigaasi laga qaatay qorey AK-47-uu watay.
Dilalka Maanta xili dharaar cad ah ka dhacay Magaalada Muqdisho ayaa imaanaya xili la guda galay Maalintii koowaad ee Bisha Barakeesan ee Ramadaan , waxa ayna Dowladu sheegtay in la diyaariyay Ciidamo loogu magac daray Nabad ku afur oo loogu tala galay xaqiijinta amaanka Caasimada.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Juunyo, 2014.